Qiimaha Cadastral: waa maxay, saameynta saameynta iyo sida loo helo | Dhaqaalaha
Encarni Arcoya | 31/05/2021 20:10 | La cusbooneysiiyay 31/05/2021 20:12 | meesha lagu nool yahay
Qiimaha cadastral waa mid ka mid ah ereyada aan aad u jecel nahay. Laakiin waliba kuwa aan aad u neceb nahay. Sababtuna waxay tahay waxaa jira waqtiyo marka qiimahani noo horseedi karo inaan helno war wanaagsan; isla mar ahaantaana aan ku jeexjeexno jeebkeena si aan ula kulanno canshuuraha laga baqo.
Laakiin, Waa maxay qiimaha cadastral? Maxaa loogu talagalay Sidee loo xisaabiyaa Maanta waxaan si faahfaahsan ugaala hadli doonnaa ereygan oo ay tahay inaad ku ogaato maskaxda.
1 Waa maxay qiimaha cadastral
1.1 Qiimaha Cadastral iyo qiimaha qiimeynta
2 Waxyaabaha saameeya qiimaha cadastral
3 Sida loo xisaabiyo qiimaha cadastral ee dhismaha guryaha
3.1 Iyada oo leh risiidhka IBI
3.2 Iyadoo la tixraacayo cadastral
4 Sida loo codsado qiimaha ku jira Cadastre
5 Maxay tahay?
Waa maxay qiimaha cadastral
Qiimaha cadastralku waa a Qiimeyn la siinayo dhisme maaliyadeed qaab sidaas ah oo loo aasaasay maxay tahay qiimaha tan. Tusaale ahaan, ka soo qaad in aad guri ku leedahay waddo cadaalad ah oo "hodan ah". Qiimaha cadastral ee gurigaas wuxuu ku sarreeyaa goobta, laakiin sidoo kale sida gurigu yahay.
Dhab ahaantii, shuruudaha qiimaynta waxaa hore u go'aamiyay gole walba oo magaalo, si aysan isku magaalo uga ahayn magaalo kale, inkasta oo ay aad isugu egyihiin.
Dhammaan hantidan ma guurtada ahi waxay si khasab ah uga diiwaangashan yihiin Cadastre, oo ah kan soo ururiya qiimaha dhammaan guryaha maguurtada ah. Waa nidaam bilaash ah oo guud, markaa waxaad si fudud ugula tashan kartaa labadaba wax aad adigu iska leedahay iyo kuwa kaleba.
Qiimaha Cadastral iyo qiimaha qiimeynta
Waxaa jira dad badan oo, si qalad ah, u maleynaya in qiimaha cadastral iyo qiimaha la qiimeeyay ay isku mid yihiin, marka xaqiiqda aysan ahayn. Qiimeynta waa ta la isticmaalay markii la dalbanayay amaahda, qiimahaasina wuu ka sarrayn karaa ama ka hooseyn karaa cadastral-ka.
Intaas waxaa sii dheer, waa midka loo dejiyey sicirka wax iibsiga ama iibka qiimahaas wanaagsan. Iyo qodob kale oo xisaabta lagu darsado, qiimaha la qiimeeyay wuu isbedbeddelayaa iyadoo loo fiirinayo duruufaha suuqa, qaab ah in wakhti kasta oo la joogo ay noqon karto mid ka qiimo badan ama ka yar.
Waxyaabaha saameeya qiimaha cadastral
In kasta oo aanan kuu sheegi karin wax kasta oo saamayn ku yeelan doona shaxanka ugu dambeeya, haddana waxaa jira waxyaabo ka mid ah oo go'aamiya, si ka weyn ama ka yar, qiimaha cadastral ee hantida. Kuwani waa:
Goobta ama goobta. Taasi waa, meesha ay wanaaggaasi ku taal iyo waxa ku xeeran.
Waxyaabaha loo isticmaalo dhismaha. Taasi kaliya maahan, laakiin sidoo kale qaabka loo dhisay, qiimaha, tayada, da'da dhismaha ...
Qiimaha suuqa. Haa, sicirka ay hantidan ma guurtada ahi ku gaari karto suuqa sidoo kale saameyn ayey ku yeelan kartaa si uun, ama ha u iibsato ama u iibiso. Sidaa darteed, waa inaad ogaataa in qiimaha cadastral uusan waligiis dhaafi doonin qiimaha suuqa. Dhibaatadu waxay tahay tan macnaheedu waa inay jirto dib u eegis joogto ah oo ku saabsan qiimahaas cadastral ah si markaa ay ula jaanqaado wixii aan soo sheegnay.
Sida loo xisaabiyo qiimaha cadastral ee dhismaha guryaha
Ka soo qaad in aad haysato hanti ma guurto ah, ha noqoto guri, guri dabaq ah, meel ... Waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad ogaato waxa ay tahay qiimaha ay leedahay,
Si loo xisaabiyo, waa inaad kudartid labadaba qiimaha dhulka iyo dhismaha. Tan waa in lagu daraa shuruudo gaar ah oo ay go'aamiyaan xukummada degmooyinka. Taasi waa sababta aanan kuu sheegi karin si sax ah qaaciido, laakiin waxaa ugu fiican in la ogaado waxa shuruudaha qiimeynta ay yihiin iyo xogta soo socota:
Tayada iyo da'da guriga.
Taariikh, dhaqan, qiimo faneed.
Kharashaadka wax soo saarka.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, uma baahnid inaad ku waasho weydiisashada xogtaan, maxaa yeelay waxaa jira laba qaab oo lagu ogaan karo qiimaha cadastralka adigoon xisaabin. Foomamkaani waa:
Iyada oo leh risiidhka IBI
Sidaad ogtahay, dhammaan hantida maguurtada ah waa in lagu caddeeyaa Cadastre iyo, hoos yimaada qiimaha cadastral, waa inaad bixisaa canshuur, sax? Hagaag, risiidhka IBI, oo sanadkiiba la bixiyo, qiimaha cadastral-ka hantida ayaa ka muuqda.
Intaas oo keliya maahan, laakiin Wuxuu kala jabayaa, dhinac, qiimaha dhulka aad dhistay; iyo, dhanka kale, qiimaha dhismaha.
Haddii ay dhacdo in aadan haysan rasiidku mid gacanta ku haya, laakiin aad xusuusato inta aad bixisay, si fudud ayaad u xisaabin kartaa. Dabcan, waa inaad ogaataa waxa canshuuraha lagugu dabaqay (waxaad ku ogaatay taas Diiwaanka Hantida).
Iyadoo la tixraacayo cadastral
Qaab kale oo lagu heli karo qiimaha cadastral ee hantida maguurtada ah waa tixraaca cadastral, taas oo ah, leh a Labaatan-lambar koodh ah oo aqoonsanaya hanti kasta. Hadaad haysato, ama khadka tooska ah ama adoo wacaya Cadastre, waxay ku siin karaan lambarka aad rabto inaad ogaato.
Sida loo codsado qiimaha ku jira Cadastre
Sidii aan horay u soo sheegnay, qiimaha cadastralku maahan "mid gaar ah" ama mid qarsoon. Waa mid caam ah, haddii aad adigu tahay mulkiilaha hantidaas dadweynaha iyo in kale, waad heli kartaa macluumaadka qaarkood.
Dabcan, ma'aha isku mid inaad heysato intaanad ahayn. Haddii aadan aheyn milkiilaha, xogta kaliya ee aad awoodid inaad hesho waa sida soo socota:
Isticmaal ama u socoto.
Codsiga qiimahan waxaa lagu sameyn karaa khadka tooska ah ama telefoonka tanna waa inaad la xiriirtaa Cadastre, oo ah jirka maamula dhammaan xogtaan.
Kahor intaanan kuu sheegin in qiimaha cadastralku muhiim u yahay canshuuraha. Waana taas, iyada oo ku saleysan tan waxaad bixin doontaa wax ka badan ama ka yar. Gaar ah, canshuuraha saameynaya qiimaha hantida maguurtada ah Waxay yihiin:
Canshuurta Dakhliga Shakhsiyeed (Canshuurta Dakhliga Shakhsiyeed).
IBI (Canshuurta Guryaha).
IP (Canshuurta Hantida)
Faa'iidada raasumaalka degmada (Canshuurta dowladda hoose ee qiimaha dhulka).
Dhaxalka iyo cashuurta hadiyadaha.
ITPAJD (Canshuuraha ku wareejinta aabbanimada iyo sharciyada la diiwaangeliyey).
Qiimaha cadastral-ka ma kuu cad yahay hadda? Xusuusnow, haddii aad shaki qabto, Cadastre ayaa kaa caawin kara inaad ogaato sababta ay hantida maguurtada ahi u leedahay qiimahaas oo aysan mid kale u lahayn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Dhaqaalaha Dhaqaalaha » Dhaqaalaha guud » meesha lagu nool yahay » Qiimaha Cadastral